The Voice Of Somaliland: Inaali laahi wa inaa ilayhi Raajucuun.
Inaali laahi wa inaa ilayhi Raajucuun.
(Waridaad)Waxaa saaka oo bishu tahay 24th bishan November, ku Geeriyooday Magaaladda Hargeisa Xoghayihii Guud ee Xisbiga KULMIYE Da'ud Mohamed Gelle.
Waxaana lagu aasayaa maanta Xabaalaha Qaranka. Da'ud reerkiisa oo kaliya kamuu bixin ee waxuu ka baxay reer Somaliland oo dhan. Ilaahayna waxaan ugu baryeynaa inuu marxuumbka Janatul-Fardusa ka waraabiyo, samir iyo iimaana inaga wadda siiyo.
Posted by Ahmed Quick Ahmed Quick at Friday, November 24, 2006